Namuhla, steel ngesivinini buyaqhubeka impahla ehola ukwenziwa metal Imibhobho esemzimbeni ehlukahlukene ngethuluzi lokusika. Alloys okunjalo eminingi evame ukusetshenziswa ekwakheni ama-umshini ngamasaha, zikhathi zokuzivivinya, namabhola amakhanda ukusebenza. Naphezu kokuvela manje ezihlukahlukene zonke izinhlobo Carbide lwaqinisa futhi Ceramic esiyinhlanganisela izinto ukunikeza ngisho enkulu ukucutshungulwa ukusebenza, ngesivinini ithuluzi lezinsimbi ngokuqinile banezikhundla yabo.
Ukusetshenziswa kabanzi Alloys enjalo ukwenziwa amathuluzi eziyinkimbinkimbi-ukusika ngenxa inhlanganisela lapho amandla okusezingeni eliphezulu (kufika ku 68 HRC) nokuzinza ezishisayo (bangalahlekelwa izakhiwo zabo zokusebenza ngisho ezingeni lokushisa 650 ° C) nge high viscosity value, kakhulu uma siqhathaniswa ukuthi we for Carbide esiyinhlanganisela izinto . Ngaphezu kwalokho, steel ngesivinini has nezimo okusezingeni eliphezulu kakhulu, okusho workability ezinhle futhi inqubo cutting ingcindezi.
Yini izakhiwo uyoba ingxubevange enjalo luncike izakhi alloying. Ngokuvamile, steel ngesivinini uhlelo multicomponent equkethe chromium, molybdenum, i-tungsten ayibe, futhi vanadium. Ukuba khona izingxenye ezihlukahlukene, kanye okuqukethwe kwabo iphesenti imigomo kukhonjisiwe kophawu. Incwadi P lapha kusho ukuthi steel kuyinto ngesivinini, inombolo okwalandela likhombisa okuqukethwe tungsten kuphesenteji. izincwadi Eminye isho khona nezinye izakhi alloying, futhi izinombolo ozayo emva izinhlamvu - amaphesenti abo isisindo ingxenyenamba e ingxubevange. Ngakho, M incwadi ibonisa khona molybdenum ohlelweni, F - vanadium K - ayibe, A - nitrogen.
Ngokusho okuqukethwe steel dopants isivinini kungenzeka oluthathwa zibe tungsten molybdenum, i-tungsten kanye molybdenum. Iqembu elikhethekile labelwe izinsimbi elixutshiwe nge ayibe. Alloys okunjalo kuvame asetshenziswe ekukhiqizeni amanye amathuluzi for machining izingxenye enzima superalloys. High speed steel, ingxubevange vanadium ikakhulukazi okuhloswe ukwenziwa amathuluzi okuthiwa "yokuqedela" kuphela - broaches, reamers nezinye.
Okuvame kakhulu kanti cishe sha endala ephezulu ijubane steel P18 isetshenziswa womshini eziyinkimbinkimbi okwenyanga futhi Ukuchusha amathuluzi. Kusho ifomu indinganiso izinga okusezingeni eliphezulu Hambayo ukucutshungulwa metal zenziwa ikakhulukazi ikhasi 9 brand ingxubevange. Kusukela ke ukwenza Mills, bezihlahla kanye nokunye okufana nalokho.
Ngokusebenza lokushisa nesivinini umbuso lezinsimbi zihlukaniswe ngezigaba ezintathu: Alloys nge evamile, okusezingeni eliphezulu futhi high ukushisa ukumelana. Ukuze iqembu lokuqala eyakhe tungsten (R18, R9) kanye tungsten-molybdenum (R6M5). Lezi izimpawu asetshenziswa ukucutshungulwa izinsimbi non-ayoni, lezinsimbi kwesakhiwo bese waphonsa yensimbi.
Ukuze izinto esigabeni sesibili libhekene wokuqukethwe lelisetulu kakhulu ayibe, vanadium ne-carbon. Sha ethandwa kakhulu eqenjini - R6M5F3. Vanadium steel ngezimiso eziphakeme bafake ukumelana. ethile yabo sina kuphela - ezimbi Sanding, ngoba nobulukhuni vanadium carbides akuyona kunabayeni inkomba efanayo elektrokorundovogo ukugaya isondo.
Ekugcineni, isigaba wesithathu steel libhekene iphesenti eliphansi carbon okuqukethwe, okuwenza efanelekayo ekwelapheni ukushisa ukumelana, insimbi engagqwali futhi titanium Alloys. Esinye isici sobuntu kubo - inqwaba izakhi alloying. Ukuze leli qembu zihlanganisa lemikhiqizo ezifana 3V20K20H4F, V11M7K23 et al.
Moonshine "Magarych Mashkovskiy" 12 l: ukubuyekezwa, imiyalelo
Electric ithawula - izinhlobo kanye nezici uxhumano
Siding: ubude ezihlukahlukene
Kuyini Mistletoe? Mistletoe: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications
"Solkoseril": yokusetshenziswa nempendulo. Analogue eshibhile "Solcoseryl"
Kanjani ukugeza upende iingubo: iseluleko esisebenzayo
St Nicholas Church (eMoscow, Ordynka): Umlando kanye nezici
Izitayela zokugqoka zabesifazane abagcwele besitembu esincane. Izembatho zabesifazane besimiso esincane: izimfihlo, amathiphu
Oleg Bragin: ubuhlakani, ukulungele ukufundisa abanye kahle
Motor ngamawinji kagesi wokubacindezela - okuyinto engcono?
Monster High Doll Frenki Shteyn